Waxay tiri arrinteeda waan la yaabay. Ninkeeda ayaa ii sheegay in aan waligeed wajigeeda nin arag maxaarimteeda mooyee. Dhakhtaradii iyada oo yaaban ayay tiri u malayn maayo inuu jiro nin Amerika jooga oo aan wajigayga arag!.
Waxay tiri waan ka yeelay inaan u baaqdo oo aan ka dhaliyo. Maalintii dambe ayaan soo booqday, waxaana u sheegay in dumar badan ay ku xanuunsadaan galmada xilliga nifaaska, waxaana u sheegay inay lagama maarmaan tahay in ugu yaraan afartan beri aan galmo loo dhawaan!.
Waxaan kale oo u sheegay inay cunto fiican cunto afartankaas beri, iskana ilaaliso shaqada adag. Kolkaas ayay ummushii ii sheegtay in arrintaas islaamku sheegay oo ay xaaraan tahay in 40 beri ummusha loo galmoodo. Tan kale waxay tiri: ummusha waa laga dulqaaday salaadda iyo soonka!.
Dhakhtaraddii waxay tiri: waan la yaabay.Baaritaanadayadii cilmiga ahaa waxaa lagu ogaaday arrimaha islaamku sheegay laakiin waa baaris iyo tijaabooyin farabadan oo dhib ah ka dib.
Dhakhtaraddii carruurta ayaa usoo gashay ummushii; si ay ilmaha u eegto, waxayna ku tiri: waxaa fiican in ilmaha dhinaca midig loo seexiyo si shaqada wadnuhu si wacan ugu socoto, kolkaasaa ninkii ugu jawaabay: annagu dhinaca midig baan u seexinaa; si aan dhaqanka nabigayaga Muxammad u hirgalino . Waxay tiri: tanna waan la sii yaabay.
Dhakhtaraddii Maraykanka ahayd waxay tiri: cimrigayagii wuxuu ku dhamaaday si aan cilmigaan u gaarno, iyaguna (muslimiinta) diintooda ayay ka barteen. Goortaas ayaan go’aansaday inaan diintaan barto, markaas ayaan fasax bil ah qaatay, waxaana magaalo kale oo uu ku yaal Markaz islaami ah, waqtiga badankiisiina isaga ayaan ku qaatay; si aan muslimiinta carbeed iyo kuwa Maraykanka ahba ula kulmo, waxna u weydiiyo, islaamnimadaydana waan ku dhawaaqay bilo ka dib.
Waxay tiri dhakhtaradii: Alxamdu lillaah.
Halkaan ka akhri warbixinta: http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-184076.htm
Faafin: SomaliTalk.com | May 24, 2013